के तपाई स्वस्थ शरिरको चाहना गर्नुहुन्छ ? त्यसो भए खानपानमा ध्यान दिनुस् - Naya Patrika
के तपाई स्वस्थ शरिरको चाहना गर्नुहुन्छ ? त्यसो भए खानपानमा ध्यान दिनुस्
डा. अरुणा उप्रेती जनस्वास्थ्य विशषज्ञ | असोज २७, २०७४
हामीले खानेकुरा खाँदा होसियारी अपनाउन सकेनौँ भने विभिन्न रोग लाग्न सक्छ । स्वस्थ हुनका लागि ध्यान दिनुपर्ने महत्वपूर्ण कुरा भनेकै हाम्रो खान्की हो । खानेकुरा मात्राअनुसार खानुपर्छ । खानाको मात्रा र ताजा, सफा खाना भएन भने हामी रोगी हुन्छौँ । त्यसैले स्वस्थ शरीरका लागि स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुपर्छ ।
खाना खाँदा तौल र हाइटअनुसार खाने गर्नुपर्दछ । धेरै शारीरिक श्रम गर्नेले धेरै खानुपर्छ भने थोरै शारीरिक श्रम गर्ने मानिसले थोरै खाना खानुपर्छ । मान्छेको शरीरलाई प्रोटिन चाहिन्छ । हुर्कंदै गरेको बच्चालाई प्रोटिन धेरै चाहिन्छ । वयस्कलाई प्रोटिन कम भए पनि हुन्छ ।
हामीले खानामा हरियो सागपात, गेडागुडी, फलफूल र हरियो खानेकुरा बढी मात्रामा खाने गर्नुपर्छ ।
दैनिक ८ देखि १० गिलास पानी पिउनुपर्छ । बिहान खाली पेटमा मनतातो पानी खानु शरीरका लागि राम्रो हुन्छ । एकैपटक धेरै पानी खाँदा किड्नीमा असर गर्न सक्छ ।
हामीले खानेकुरा थोरै–थोरै गरी दिनमा ४–५ पटकसम्म खानुपर्छ । बेलुकाको खाना सकेसम्म कम मात्रामा खानुपर्छ । राति धेरै खाना खाँदा खाना नपच्ने, मोटोपनलगायतका समस्या देखिन सक्छ ।
खानामा कार्बोहाइड्रेड, भिटामिन, मिनरल्स, प्रोटिन सबै मिलाएर खानुपर्दछ ।
बदाम, चिप्स, मिठाइ, तारेको खानेकुरा खाने प्रचलन बढी हुन्छ । यस्ता खानेकुराले पेट नभरिने र अस्वस्थ हुने डर हुन्छ ।त्यसैले खाजा खाँदा हरियो सागपातबाट बनेका खानेकुरा, गाँजर, मुला, फलफुल खानुपर्छ ।
शाकाहारी खानामा बढी ध्यान दिनुपर्छ । मिठाई घरमै बनाउने, हलुवा, पुरी घरमै बनाएर खाँदा राम्रो हुन्छ ।
बारम्बार तताएको तेलमा तारेको खानेकुरा खानु हुन्न । यसले क्यान्सर हुने सम्भावना उत्तिकै हुन्छ ।